uRefawmf c&D;oGm;cJhzl;aom AD,uferftaMumif;
Thread: [mm]uRefawmf c&D;oGm;cJhzl;aom AD,uferftaMumif;[/mm]
08-28-2011 02:59 AM #51
ဟနွိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ ပြတိုက်တွေလိုက်ကြည့်ရင်း အပြန်မယ် တက်စီ သမားက ဒီလမ်းရှေ့က ဖြတ်ပြန်တယ်။ မြို့ထဲကလမ်းအတော်များများက ညနေဘက်ရုံးဆင်းချိန်ဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ကြပ်သိပ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းရောက်တော့ ဘိုလိုမတတ်တဲ့ တက်စီသမားက သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ကျနော့လှမ်းပြောတယ်။ နားမလည်ဘူးဆိုပြီး ကျနော်က ကျနော့ခေါင်းကို လက်ညှိုးထိုးပြီး လက်ဖဝါးခါ ပြတော့ သူက လက်နှစ်ဘက်ကိုသုံးပြီး တစ်ချောင်းထိုး အတတ်ပညာရဲ့ (ကျုပစ်ထဲက တစ်ချောင်းထိုးအတတ် နဲ့ဘာမှ မဆိုင်ပါ) အမှတ်သားကိုပြပြီး စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ပြောလေရဲ့။ ဟီး ။
နိုးနိုး ဆိုပြီး ဟိုတယ်ကိုသာမောင်းခိုင်းလိုက်ရတယ်။ တော်ကြာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ပြန်မရောက်ရင် မဒမ်လင်းရဲ့ တယောလက်သံကြားရပြန်မှာမို့။ ကျုပစ်က နောင်ကြီးများ တစ်ခါတစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်ရင်တော့ သီချင်းလေးဘာလေး ဝင်ဆိုပေါ့ဗျာ။ သိတယ်မို့လား သီချင်းနှင့် ဂီတဟာ လူကို နုပျိုစေတယ်တဲ့။ အဟက် ဟက်။ ဗီယက်နမ်ရေးရာ ကြွမ်းကျင်သူများ၏ ကွန်မန့်များကိုလည်း ကြားနာလိုပါ၏ခင်ဗျာ။
2323, badinf, baung, Botazan, daylight, Deadmanwalking, happyvalley, Incubuz, justkidding, KaungKinPyar, Ko Khant, KoThuZ, mgmgthan, mokenlay, Mood, NayWarWar, Perigee, Theory, THIHA
09-01-2011 02:33 AM #52
ဟနွိုင်း မြို့သစ် Development Area တွေမှာ နိုင်ငံတကာက နာမည်ကြီးဟိုတယ်တွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဆောက်ကြတယ်။ Hanoi Marriott Hotel အတွက် မဒမ်လင်းကအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတော့ ကျနော့ကိုပါ စပွန်စာပေးတာကြောင့် ခွင့်ယူပြီးလိုက်သွားဖြစ်တယ်။ ဟနွိုင်းက ဗီယက်နမ် ရဲ့ ရှေးမင်းနေပြည် ဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း ၊ အနုပညာထွန်းကားရာ မြို့ဖြစ်တာတစ်ကြောင်းမို့ သွားဖို့စိတ်ဝင်စားတာလည်းပါသပေါ့။ နောက်ပြီး ဗီယက်နမ်တိုးတက်တယ်ချည်းပြောနေတော့ အဆောက်ဦး ထိမ်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရသူတစ်ဦးအနေနှင့် သူတို့ဆီက အဆောက်ဦးတည်ဆောက်ပုံ နှင့် ထိမ်းသိမ်းကြပုံ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလည်း လေ့လာဖို့စိတ်ကူးထားခဲ့တယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အဓိက တည်ဆောက်သူတွေဟာ ပြည်ပကန်ပနီအဖွဲ့စည်းတွေသာဖြစ်နေတာဟာ ထုံးစံလိုဖြစ်နေတော့ သိပ်တော့မဆန်းလှပါ။ ဗိသုကာ ဒီဇိုင်းထုတ်တာလည်း ပြည်ပ ပညာရှင်တွေသာများပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အဓိကအရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့် အခန်းနားလုပ်ရာ အဆောက်ဦး ၊ ဟိုတယ်၊ ပြတိုက် ၊ ကွန်ဒို နှင့်အခြား အထင်ကရ အဆောက်ဦးဒီဇိုင်းတွေဟာ အတော်လေး ခေတ်မှီတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောတော့ အနောက်၊ ဒူဘိုင်း အဘူဒါဘီ ၊ စတိတ် ဘက်တွေမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဟန်တွေနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တွေပါ။ ဟိုတယ်တွေကတော့ဖြင့် မိခင် ဟိုတယ်အစုအဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံရိပ်ဟန်ပန် အတိုင်းတည်ဆောက်ရတာဆိုတော့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီတယ်ဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
စောစောကပြောခဲ့သလိုဘဲ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ လုပ်သားအင်အားစုတွေထဲမှာ ကော်လာဖြူအုပ်စု (ပညာရှင် အုပ်စု) တွေက နိုင်ငံခြားသားတွေများနေသေးတယ်။ ပြည်တွင်းပညာရှင်တွေမရှိမဟုတ် ရှိပါတယ်။ နည်းနေသေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဆောက်လုပ်သူအဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာ အများဆုံးတွေ့ရတာက ကိုရီးယား ၊ ဂျပန် ၊ ယူနိုက်တက် စတိတ် ၊ ပြင်သစ် ၊ စင်ကာပူ နှင့် အခြားနိုင်ငံတွေက ပညာရှင်တွေပါ။ တရုတ်အဖွဲ့စည်းတွေ ထင်သလောက် နေရာမရတာတွေ့ရတယ်။ အင်ဂျင်နီယာ အုပ်စုတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ ကိုရီးယား၊ ဂျပန် ၊ စင်ကာပူ ၊ ဟောင်ကောင် ၊ မြန်မာ ၊ ဖိလစ်ပိုင် နှင့်အခြား နိုင်ငံသားတွေလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။ ဗီယက်နမ် ခေတ်ပညာတတ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် ပရောဂျစ်ကြီးတွေမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ဖြစ်နေသေးတယ်။
ဒီတော့ အောက်တစ်ဆင့်ဆင်းပြီး ကြီးကြပ်သူ နှင့် အခြေခံလုပ်သားတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ ပြည်တွင်းအလုပ်သမားအင်အားစု များနေတာသတိထားမိတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်သူ အဆင့်မှာတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့စ် နှင့် အိန္ဒယ နိုင်ငံသားတချို့ကိုတော့ ကြိုကြားတွေ့နေရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ စင်ကာပူ လုပ်ငန်းခွင်တွေကနေ ယာရီလာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခြေခံလုပ်သားတွေကို လေ့လာကြည့်တော့ ' ပျင်းတယ် ၊ အမြဲတမ်း လိုက်လံပြောဆိုနေမှာသာ လုပ်ငန်းတွင်တယ် ' ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ဟာ လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကရော ၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် ကြီးကြပ်သူတွေကပါ တစ်သံတည်း ပြောကြတယ်။
အလုပ်ချိန်ကို မလေးစား၊ အထက်အရာရှိသော ဘာသော ညာသော သိပ်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ် ၊ ဆေးလိပ် အရက် အင်မတန်ကြိုက်၊ မကြာခဏ အစုသင်းဖွဲ့ပြီး အတိုက်ခံလုပ် ၊ အလုပ်နည်းနည်းလုပ်ပြီး အခွင့်ရေးများများတောင်း စတဲ့ မှတ်ချက်တွေလည်းကြားရတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ထမင်းစားနားချိန်ဟာ အနည်းဆုံး တစ်နာရီခွဲလောက်ရှိတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ချိန်ကို နာရီဝက်လောက်ယူကြတယ်။ ပြောလည်း ဂရုမစိုက်။ သိပ်ပြောလွန်းတော့ နောက်နေ့ အလုပ်မလာတော့။ အခန့်မသင့်ရင် ပြန်ဟောက်ခံရမယ်၊ အစုဖွဲ့ပြီး ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခံရမယ်။ ဒီတော့ အလုပ်မပြီးတဲ့အပြင် သူတို့ကို ကြည့်ကျက်ပေါင်းပြီး လိုက်ရောနေရတဲ့ အနေထားဖြစ်နေတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောတော့ လုပ်သားဘက်က အသာစီးရနေတဲ့ အနေထားပေါ့။
ကျနော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်က သိပ်အေးတဲ့ ဆောင်းတွင်းကြီး၊ တစ်ခါတစ်လေ နံနက်ခင်းစောစော မိုးရွာလေ့ရှိတယ်။ အဲလို မိုးရွာတဲ့နေ့တွေဆို အိမ်မှာဘဲကွေးပြီး နေလေ့ရှိတယ်။ ခါတိုင်း ရှုပ်ရှက်ခပ်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာ သိသိသာလူနည်းသွားတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ၊ အလုပ်ခွင်မသွားကြတော့ဘူး။ Hanoi Marriott Hotel ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့ အခြေခံလုပ်သား ၁၀၀ လောက်မှာ အယောက် ၂၀ ဘဲလာလို့ အဲဒီနေ့ အလုပ်မလုပ်လိုက်ရဘူး။ နောက်နေ့လာတဲ့ သတိပေးစာ/စကား (warrning letter) ပေးမယ်လို့ စိတ်မကူးလေနဲ့ နောက်ရက်မလာတော့ဘဲနေမယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ဘဲအလုပ်မပြီးဘဲဖြစ်ရတယ် ဆိုပြီး ကိုရီးယားဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ကတော့ ပြောလေရဲ့။
ဗိယက်နမ် ဆောက်လုပ်ရေးတွေ နှင့် လက်ရှိ ရှိပြီးသားအဆောက်ဦးတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ် (Fire Protection System) ဟာ ပြည်တွင်း သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းပါတဲ့။ကျနော်က လက်ရှိအလုပ်မှာ Assistant Fire Safety Manager အနေနှင့်ပါ လုပ်နေရတော့ အဲဒီဘက်ကို တစေ့တစောင်းလေ့လာမိတယ်။ စင်ကာပူ နှင့် ယှဉ်ရင်တော့ သို့ပေမယ့် ရော့တိရော့ရဲနိုင်တယ်လို့မြင်မိတယ်။ မီးလန့်တာတို့ ၊ မီးလောင်တာတို့လည်း မကြာခဏဖြစ်တယ်။ မီးလန့်တိုင်း လျှပ်စစ်မီ ဖြတ်တောက်သွားတတ်လို့ ဟိုတယ်မှာ မီးမရဘဲ တစ်နာရီလောက် ဖြစ်နေသေးတယ်။ ကိုယ်တည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကအသေးစား ဟိုတယ်။ အရံသင့် မီးစက်ရှိပေမယ့် မနှိုးဘဲထားလို့ သိပ်အေးတဲ့ ဆောင်းဒါဏ်ကိုခံနိုင်ဖို့ စောင်ခြုံထဲကွေးနေခဲ့ရသေးတယ်။
အဓိက လမ်းပေါ် နှင့် အထင်ကရ အဆောက်ဦးတွေရဲ့ အပြင်ဘက်က မြေအောက် ပိုက်လိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်တော့လည်း ဖြစ်သလို သွယ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းကြိုး ၊ ဖိုင်ဘာကြိုး ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကြိုး နှင့်အခြား ဝါယာ ကေဘယ်ကြိုးတွေသွယ်တန်းပုံဟာလည်း စည်းစနစ်မရှိတာတွေ့ရတယ်။ တစ်ခုခုပျက်လို့ ပြင်မယ်ဆိုရင် အတော်လေး အန်တရာယ်များတဲ့ အနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်မှုလည်းမရှိ။ မြေအောက် သွယ်တန်းတဲ့ မြောင်းတွေမှာ အမှိုက်သရိုက် နှင့်အညစ်ကျေးတွေ စွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အရှည်အတိုင်းတာတိုင်းမရလို့ ဆက်စပ်ပြီးသွယ်တဲ့ ဝါယာကေဘယ် ကြိုးတွေမှာ Juntion Box လိုစနစ်တကျဖြစ်မယ့် နည်းကို မသုံးဘဲ ဖြစ်သလို ငုတ်တိုင်မှာ မူလီနှစ်ခု ရစ်ပြီးလုပ်ထားတာတွေတွေ့တယ်။ တချို့ ကေဘယ်တွေက တန်လန်းကြီးပေမယ့် ဘာမှ မှတ်သားထားတာမျိုးမဟုတ်တော့ ဘာမှန်းမသိရ။
အဲဒါတွေကြည့်ပြီး အတော်လေး စဉ်းစားမိတယ်။ ပြင်ပ ဟန်ပန်တွေမှာတော့ အဆောက်ဦးကြီးက ကြီးမားလှပလို့ ၊ လမ်းတွေက ကျယ်ပြီး သာယာဖြောင့်ဖြူးလို့ ၊ သို့ပေမယ့် မမြင်ရတဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာတော့ ဖြစ်သလိုလုပ်ထားကြတယ်။ ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ တိုးတက်မှုတော့ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ နောင်တစ်ချိန် မှာ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ဖြစ်လာမယ်လို့ မြင်မိတယ်။ ဒီတော့ မလိုလားအပ်ဘဲ ငွေတွေထပ်ကုန်ဦးမယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါ ကိုယ်ခဏတာနေနေတဲ့ စင်ကာပူ ခြသေ့င်္ကျွန်း နှင့် အရှေ့တောင် အာရှရဲ့ နောက်ပေါက်ကျား တစ်ကောင်ကို နိုင်းယှဉ်ကြည့်မိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်တွေသာဖြစ်ပါကြောင်းဗျာ။
baung, Botazan, daylight, Deadmanwalking, happyvalley, hellocatcat, Incubuz, justkidding, mgmgthan, mokenlay, Mood, NayWarWar, Perigee, solidsnake, Theory, ThunderHawk
09-08-2011 04:47 AM #53
ဟနွိုင်းကို စထွက်တဲ့နေ့က လေယဉ်ပေါ်တက်တော့ ဗီယက်နမ်အဲလိုင်းနဲ့။ Air Bus ကိုခုမှ စီးဖူးတာ။ ရွာမှာတုန်းက ရန်ကုန်-ကော့သောင်း စီးတော့ ဖော်ကာဆိုလား။ နောက်တော့ စလုံး - ရန်ကုန် ကျတော့ SilkAir ကဘာလေယဉ်အမျိုးစားလဲတော့မသိ။ ကျဉ်းကျဉ်းကြုပ်ကြုပ်ထိုင်ရတာကလား။ တောသား ငလင်းအဖို့မှာတော့ ခုလိုလေယဉ်အကြီးစားကို အဲဒီတော့မှ စီးဖူးသာရယ်။ လေယဉ်ပေါ်ရောက်တော့ အိုက်စပ်စပ်ဖြစ်နေသယ်။ မခံနိုင်တော့လို့ အပေါ်အင်းကျီကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး စွတ်ကျယ်နဲ့နေလိုက်တယ်။ ဘေးကလူတွေက ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်လုပ်နေပေမယ့် ဂရုစိုက်မနေတော့ပါ။ ပူတဲ့ဒါဏ်မခံနိုင်။ ဟနွိုင်းမထွက်ခင် ရာသီဥတုအခြေနေကို အွန်းလိုင်းကကြည့်တော့ ၇ လောက်ရှိသယ်တဲ့။ ဒါဆိုသိပ်အေးသပေါ့။ ဒါကြောင့် လေအေးမဖွင့်ဘဲ လေပူဖွင့်တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး နောက်တော့မှ သဘောပေါက်သယ်။
သိပ်အေးတယ်ဆိုပေမယ့် ရာသီဥတုက ခြောက်ကပ်ကပ်ရယ်။ တစ်နေကုန်နေကို မမြင်ရ။ တစ်ခါတစ်ခါ မိုးရွာလိုက်သေးသယ်။ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ အနွေးထယ်နှစ်ထပ်ဝတ်ရသယ်။ ခေါင်းဆောင်း ဆောင်းရသယ်။ နားရွက်လေတိုးလို့ သိပ်အေးလာတဲ့အခါ ကိုက်ခဲလာတတ်သယ်။ ဒီလောက်အအေးဒါဏ်မခံနိုင်မှာတော့ အနောက်ဘက် နှင့် ဘိလပ်တို့မှာ နေလို့မဖြစ်လို့လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားနေမိရဲ့။
မဒမ်လင်းကို ရုံးပို့ပြီးတာနဲ့ ရုံးနဲ့ကပ်ရက်က ဟနွိုင်းပြတိုက်ကို ဝင်။ နေ့လည် ထမင်းစားအချိန်ထိ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတာနဲ့ နီးစပ်ရာ ရှော့ပင်းစင်တာကို သွားသယ်။သုံး ထပ်အဆောက်ဦး မှာ အောက်ထပ်က စတိုးဆိုင်တွေ နှင့် အပေါ်ထပ်မှာ BIG C စူပါမားကတ် ရှိတဲ့ နေရာပေါ့။ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာတော့ အစားသောက်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ။ ဈေးတော့ သိပ်မသေးပါ။ အရသာ သိပ်ကောင်းလှတယ်မဟုတ်။ အဲဒီမှာ ထမင်းစား ၊ ကော်ဖီသောက်ရင်း အပြင်က မြင်ကွင်းတွေကို ဒုံပါတ်ရိုက်ဖြစ်သယ်။
BIG C စူပါမားကတ် ရှိတဲ့ဒီအဆောက်ဦးဟာ Development Area မှာတော့ လူသိများ၊ လူလာများတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။
စားသောက်ဆိုင်နေရာကနေ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါ မကြာခင်ကမှစတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ GRAND PLAZA HOTEL
ဆောက်လက်စ ပရောဂျစ်တွေ နှင့် ဆောက်လုပ်ပြီး အဆောက်ဦးတွေပါ
အဝိုင်းပတ် ရှိရာ လမ်းမကြီးဆီသို့ လှမ်းအကြည့်
ရှော့ပင်းစင်တာနား ကပ်ရောင်းနေကြတဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေ
ဆောက်ပြီးစဟိုတယ် ရှေ့နားဆီက မြေကွက်ဟာ ယခင်ကအမှိုက်ပုံနေရာဖြစ်ပြီး ခုတော့ ပရောဂျစ်တစ်ခုအတွက် လောလောလတ်လတ် ရှင်းထားတဲ့ နေရာတစ်နေရာ.
Botazan, daylight, Deadmanwalking, hellocatcat, Incubuz, mgmgthan, mokenlay, Mood, NayWarWar, Ni Maung, Theory, ThunderHawk
09-09-2011 08:25 AM #54
ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်သိပ်ပြင်းတယ်လို့ထင်မိတယ်။ သူတို့ဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာတော့ 2-3AD လောက်ကတည်းက စစ်အင်အားကြီးမားတဲ့ တိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်ရှိခဲ့တယ်။ ဒေါင်းဆောင်း ဖားစည်နဲ့တူကြော်ကြားလှတဲ့ ဒေါင်းဆောင်း ခေတ်ဟာ လက်မှုပညာတွေသိပ်ထွန်းကားပြီး ရှေ့ရောက်ခဲ့တဲ့ အထင်ကရ မြို့ပြနိုင်ငံကြီးတွေပေါ့။ သူတို့လူမျိုးတွေဟာ တရုတ်ကို တော်လှန်ခဲ့တယ်၊ ပြင်သစ်ကို တော်လှန်ခဲ့တယ်၊ ကဘာပေါ်မှာ ဘယ်သူမှစစ်ရေးအရ မနိုင်တဲ့ အမေရိကန်တွေအပေါ် အောင်ပွဲရခဲ့တယ် ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူတတ်ပါသေးတယ်။ သူတို့ပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းသလောက် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်းအပေါ်မှာလည်း အတော်လေး ရိုသေလေးစားချစ်ခင်ကြတာ သတိထားမိပါရဲ့။
ကျနော် ယောက်သွားတဲ့အချိန်က ဗီယက်နမ် ထောင်စုနှစ် အထိမ်းမှတ်အချိန်ခါ သမယဖြစ်နေတော့ လမ်းတွေပေါ်ကြည့်လည်း ရဲတွတ်နေတယ်။ မြို့ပြသစ်ဧရိယာဘက်မယ် အသစ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ Conference Hall အဆောက်အအုံကြီးမှာ ဒေသတွင်း ခေါင်ဆောင်တွေပါတဲ့ အစည်းဝေးလုပ်တယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာတဝိုက်ကို ရဲတွေ စစ်သားတွေ စောင့်ကြပ်နေတာတွေ့လို့ ဓာတ်ပုံတောင်ကောင်းကောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မရိုက်ရဲဘူး။ တော်နေကြာ သူလျှိုဆိုပြီး အဖမ်းခံနေရရင် ခက်ရချည့်။
နိုင်ငံတကာအစည်းဝေးတွေ ကျင်းပရာအဆောက်ဦး ( ဟနွိုင်း ပြတိုက်ဘေးကပ်ရက်ဝန်းထဲမှာပါ )
အစောင့်တပ်သားတွေ နှင့် ကောင်းကင်ဓာတ်ကြိုး
ရှေ့လမ်းမပေါ်က ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကို ငေးနေတဲ့ အစောင့်တပ်သားတစ်ယောက်
နောက်ရက်တွေမှာတော့ ရောက်ခဲ့တဲ့ ဟနွိုင်း စစ်သမိုင်းပြတိုက်အကြောင်းရေးဦးမယ်။
baung, Botazan, Incubuz, mgmgthan, Mood, NayWarWar, thatonthu
05-23-2012 08:03 AM #55
&Hk;u ygupfpwef ukvm;av;wpfa,muf AD,uferfudk tvkyfudwfpeJUoGm;wm... vrf;ab;r,f tdkifzkef;av;xkwfNyD; ajryHkMunhfaewkef; ab;uae vlwpfa,mufu olUzkef;udk jzwfceJ qGJ,lNyD; cyfoGufoGufavQmufoGm;owJh... oluvJ &kwfw&uf pwmvm;qdkNyD; aMumifaewkef; [dku ab;rSm armif;oltoifhapmifhaewJh qkdifu,fay: wufNyD; armif;xGufoGm;a&mwJh... iPhone 4S av; yvHk................
blackcat13, daylight, Deadmanwalking, Emerald Mya, happyvalley, hellocatcat, ironhorse, k-pooh, mrlynn, SakanaKun, yokesoe
06-17-2012 05:27 AM #56
ဗီယက်နမ် ဟနွိုင်းရောက်တဲ့အခါ ကိုယ်ကြိုက်တာက လမ်းဘေး ပြောင်းရှည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး သူတို့ရောင်းတဲ့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းလေးသောက် စကားလေးဘာလေးပြောပေါ့။ တစ်ယောက်တည်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုပေမယ့် တိုးဂိုက်တော့မခေါ်ဖြစ်ဖူး။ တိုးတိုက်ခေါ်ရင် ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ် အချိန်ဖြုန်းလို့မရမှာကိုလည်း တွက်မိသေးတာကို။ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေအများစုဖြစ်တဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစား နှင့် အလယ်လတ်လူတန်းစားတွေရဲ့
နေ့စဉ်လူနေထိုင်မှုဘဝကို လေ့လာလို့အကောင်းဆုံးနေရာဟာ လူအများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာ ဈေးပါဘဲ။
ဒါကြောင့်ဘဲ ဟနွိုင်းဈေးရောက်ဖြစ်တယ်။ ဟနွိုင်းဟာ ပန်းမြို့တော်မဟုတ်တဲ့အတွက် ဟိုချီမင်းမြို့တော်လို ပန်းဈေးမရှိဘူး။ ဘာဟီရတွေရောင်းတဲ့ သာမန်ဈေးဘဲပေါ့။ မြန်မာပြည် တောင်ကြီးမြို့မဈေးကို သွားသတိရပါတယ်။ သဘာဝ တူတာကို။ ဒါကြောင့်လည်း ဟနွိုင်းရောက် အရသာဟာ ရှမ်းပြည်တောင်ပေါ်မြို့တစ်မြို့ရောက်နေသလိုဖြစ်နေတယ် ။ ပန်းချီဆရာ ဓာတ်ပုံဆရာတို့ အကြိုက်တွေ့နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဘဲပေါ့။
လမ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ စက်ဘီး ဆိုင်ကယ် လူ လမ်းဘေးဈေးဆိုင် တွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးပြည့်ကြပ်နေမယ်။ သို့ပေမယ့် အားလုံး သူ့နားလည်မှု နှင့် သူ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးဆိုတာ ပစ္စည်းဝယ်ရောင်း လုပ်တဲ့နေရာတင်မက နားလည်မှုဖလှယ်ရာ နေရာတစ်ခုဘဲပေါ့။
ဆိုင်နေရာ ဆိုင်ခန်းနဲ့မဟုတ်ဖဲ စီးဘီးရဲ့ ရှေ့နောက်မှာ နှင်းဆီပန်း ဂန္ဓမာပန်းတွေတင်ပြီး ဈေးထဲလှည့်ရောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ ပန်းသယ်ကြီးလည်း နံနက်ခင်းဗိုက်ဖြည့်ချင်တဲ့အခါ လမ်းဘေးဆိုင်ထိုင်ပြီးစားလိုက်ရုံပေါ့။ ဝယ်သူလာတဲ့အခါ ထပြီးရောင်းပေါ့။ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေကလည်း ပုကန်လေးတွေကိုင်ပြီး ကိုယ့်အလှည့်စောင့်လို့။ တစ်ယောက်သော ကောင်မလေးက သံပရာသီးခြမ်းကိုက်လို့နေသေးတယ်။ ဗီယက်နမ် ရိုးရာအစားစာဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ ဆိုကောင်းဆိုနိုင်မယ်။ ဆီနည်းတယ်၊ အသီးရွက်များတယ်၊ အငန်ပေါ့တယ်၊ သံပရာခြမ်းကတော့ အမြဲလိုလိုပုကန်ထဲထည့်ပေးတတ်တယ်။
သူ့ဘေးကဆိုင်မှာတော့ ပဲစေ့လိုလို စားစရာတွေဘန်းနဲ့ချရောင်းတယ်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကလည်း ဝယ်စားတယ်ဆိုတာထက် ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လက်တစ်ဆုပ်လောက်နှိုက်ပြီးစားသွားကြတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆိုင်ရှင်ကတော့ ဘာမှမပြောပါ။ ဈေးကွဲချိန်မှာတော့ ဈေးသမတို့ အလုပ်နည်းနည်းပါးသွားပါပြီ။ ထွေရာလေးပါးပြောရင်း တစ်နေ့တာရောင်းအားအကြောင်းဘဲပြောလေမလား၊ ရပ်ကွက်ထဲကအကြောင်းတွေဘဲပြောလေမလား ၊ ညဘက်လာတတ်တဲ့ ကိုးရီးယားကားအကြောင်းဘဲပြောလေမလား ၊ အဖော်အချွတ်ခန်းတွေတရစပ်ပါတဲ့ သူတို့ဗီယက်နမ်မင်းသမီးလေးအကြောင်းဘဲပြောလေမလား တကယ့်ကို ထွေရာလေးပါး။ ဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့ တောအလှူစာအုပ်ထဲက ' တာဟန်းဈေး ' အက်ဆေးကိုတောင် သွားသတိရမိသားလား။
badinf, bigxxx, daylight, Deadmanwalking, DrJones, jim beam, k-pooh, Ko Khant, MNO.BN, murphy, weithet, yokesoe
06-17-2012 07:48 AM #57
'DxJ ra&mufwmMumawmh ckrS awGYw,f/ usaemf AD,uferfudk oGm;wJh oli,fcsif;wdkif;udk tJ'gav; owday;avh&dSw,f/ zkef;aumif;awGudk vrf;rSm xkwfquf&if owdxm;yg/ udk,fh&JY ydkufqHtdwf ? wallet awGudk taemufbufrSm b,fawmhrS rxm;yJ a&SYbufrSmom xm;yg/
txl;ojzifh [dkcsDrif;jrdKYay:rSm tJ'gawGu ydkjzpfwwfygw,f/ aemufjyD; plygrm;uwfawGxJrSmqdk&if vnf; cg;ydkufEdIufwmawG bmawG cH&avh&dSw,f/ owdeJY udk,fhzkef;awG wallet awGudk owdav;eJY xdef;odrf;Muaygh/ vdkufzrf;vdkY rdvdkY &Jpcef;a&mufoGm;vnf; udk,fu ausat;w,fqdkwJh pm&GufrSmyJ vufrSwfxdk;cdkif;vdrfhr,f/ tJpmawGtukefu AD,uferfvdkawGcsnf;a&;xm;wm/
cg;ydkufEdIufwwfwJholawGxJrSm i,fi,f&G,f&G,f 16...17 rdef;uav;awGvnf; ygwwfw,faemf/ awmfMum aumifrav;awGyJqdkjyD; earmferJhaerd&if aemufaeY pm;p&maomufp&mr&dSyJaevdrfhr,f
usaemf tjrJaeavh&dSwm Biên Hòa , Dong Nai jrdKYrSmyg/ [dkcsDrif;uawmh 'Dudk wacgufa&muf&if wpf&ufavmufawmh oGm;jzpfw,f/ aemufydkif;awmh vnfp&mvnf; ukefoavmuf&dSwmeJY ysif;wmeJY odyfroGm;jzpfawmhbl;/
AD,uferfrSm ukefaps;EIef;awG t&ifxuf tawmfwufvmw,f/ vGefcJhwJh3ESpfu pm;wJh acgufqGJjyKwf wyGJu 16000 tck tJqdkifrSmyJ 25000 wJh/
qdkifaumif;aumif;qdk 45000 avmufay;&w,f/ olwdkYaiGaps;u t&ifu 1S$=13500 avmufuae tck 1S$=16100 ausmfjzpfvmwmvJ ygw,f/
AD,uferfawGa&muf&if tenf;qHk;vdkwmav;awGawmh AD,uferfvdk em;vnfatmif vkyfxm;wm ydktqifajyw,f/ 'Du ausmif;awGu txufwef;rS t*Fvdyfpm poifwmqdkawmh awmf&Hkwef&Hk txufwef;xd rwufxm;whJolawGu How much awmif rodwmrsm;w,f/
aemufydkif; aemufydkif;uav;awGuawmh acwfeJYtnD i,fi,fwnf;u t*Fvdyfausmif;av;awG xm;Muawmh t*Fvdyfpm tajccHavmufudk ajymwwfvmMuw,f/
tck AD,uferfwpfa,muf&JY tajccHvpmu AD,uferfa'gif3oef;jzpfoGm;jyD/ olYEdkifiHeJY olYvlrsdK;twGuf 'DydkufqHu tawmfudk tqifajyw,f/ AD,uferfrSm pm;aomufqdkifoGm;vdkY bD,mrSmaomufMur,fqdk
olwdkYawGu bD,mudk uwfvdkufudk vmcscdkif;xm;wm/ bD,mwbl;rS pifumyl jym; 80 ..90 avmufygJ &dSwmvnf; ygwmaygh/ tJxJu MudKufoavmufudk aomufMuwm/ usaemfwdkYaomufovdk pum;av;ajym at;aq; cswmr[kwfbl; wcsdefvHk; aomufuG csuGeJY tawmfjrefwm/ renf;rSDatmifvdkuf&w,f
bD,maomufjyD; tJrSmwifr&yfMubl; um&mtdkauudk qufoGm;Muao;w,f/ jrefrmrSmqdk bD,maomufjyD; umumqdkifoGm;wm Mum;&if ( um&mtdkauqdkifawGu oD;oefYoDcsif;qdkwm r[wkfMuawmh ) ESmacgif;&HI YMuayr,fh 'DrSmu &dk;&mvdk jzpfaeawmh bmrS rxl;bl;/ a,mufusm;av; rdef;uav; tukef aomufjyD; pm;jyD;&if um&mtdkau oGm;qdkMuwm tavhtxwckygyJ/
usaemfaomufcsifwm wck&dSw,f/ AD,uferf csuft&uf/ usaemfoGm;pm;avh&dSwJh Muufom;okwfqdkifav;rSm a&mif;w,f/ udk,fvJ r&JwmeJY raomufjzpfyJ bD,myJ aomufaomufjyefvm&wm/ 'DrSm acG;om;qdkifawGvnf; tawmf&dSw,f/ acG;om;eJY csuft&ufa&mif;wJh qdkifwckawGYzl;w,f/ t&ufudk ykvif;MuD;awGeJY xnhfxm;wm/ qkdifa&SYrSm acG;yHkeJY qdkif;bkwf/ ADvdka&;xm; aocsmMunfhrS acG;om;a&mif;wmMuD;jzpfaew,f/
jynfwGif;bD,mxJrSm emrnfMuD;wmu Saigon beer teDa&mif/ Saigon tpdrf;a&mifvnf;&dSw,f/ jyD;awmh 333 qdkwmvnf; &dSao;w,f/ 333 uawmh wbl;rS 9000 VND avmufyJay;&w,f/
usaemfu 'Da&muf&if Saigon Beer teDyJ MudKufvdkY aomufavh&dSw,f/
t"du oGm;a&;vma&;u qdkifu,foHk;Muawmh olwdkYtwGufu tawmftqifajyw,f/ udk,fawGvdk vlawGtwGufuawmh tqifrajybl;/ wufpDcuawmh tenf;i,faps;MuD;ygw,f/6uDvdk rDwmavmufc&D;udk AD,uferf 1 odef;avmufay;&avh&dSw,f/
'DrSm trsm;qHk;qdkifawGu aumfzDqdkif ? um&mtdkauqdkif ? tEdSyfcef; ? bD,mqdkif ? bDvd,uf a[mha'ghaygifrkefYqdkif awGygyJ/ 'Du AD,uferfawGu ZdrfcHwm aomufwm pm;wm tawmfvkyfMuw,f/ Happy jzpfMuw,fqdkygawmh/ qHyifnSyfqdkifvdk qdkifawGrSm em;xdk;cHjyD; ZdrfcHaeMuwJholawG ? aumfzDqdkifrSm '&if;bufvdk yHkpHcHkrsdK;eJY at;at;vlvlxdkifaeMuolawG trsm;om;As/
'DrSm River side coffee qdkifawGu tawmf vlpnfMuw,f/ Dong Nai River MuD;ab;rSm zGifhxm;Muwm/ qdkifawG&JY tjyiftqifav;awGuvnf;tawmfaumif;w,f/ aumfzDu qdkifwkdif;eD;yg; aumif;Muygw,f/
aemufwcku AD,uferfa&muf&if a&oefYyJ aomufwm ydkaumif;w,f/ 'grSr[kwf MudKcsufaomufaygh/ AD,uferfppfyJG&JY qdk;arGawGtjzpf wcsdKYae&mawGu a&awGu tqdyfoifhaewkef;yJvdkY od&w,f/
'DrSm emrnfMuD;whJ plygrm;uwf2ckuBig C eYJ Co-OP Mark yg/ Co-Op Mark udk olwdkYu Co Mark vdkYyJ ac:Muwm rsm;w,f/
usaemfhtvkyf&dfSwJh Bien Hoa u Co-Op Mark rSawmh MegaStar &kyf&Sif&Hkyg&dSygw,f/ jcifwpfaumifp ESpfaumifp awGY&wmuvGJ&if toHpepfaum &kyfpepfaum tawmfaumif;ygw,f/ ckHawGu pifumyl&HkawGvdk wdkjywfjywfav;r[kwfyJ t&Snfqdkawmh usawmfawmh ydkMudKufw,f / &kyf&SifvufrSwfaps;u 50,000VND uaejyD; 3D qdk 85,000 VND , 100,000 VND tpm;pm;&dSw,f/ 'Du &kyf&Sif&HkawGu Ak'¨[l;aeYudk Happy day owfrSwfjyD; aps;avsmhay;ygw,f/ 25,000 VND eJYaps;avsmhygw,f/ usaemf jyD;cJhwJh tywfu &Hk;u q&morm;wdkY twGJeJY twl MADAGASCARE3..3D oGm;MunhfcJhao;w,f/ http://www.megastar.vn/
AD,uferfum;awGxJrSm Munhfcsif&if nTef;csifwmu rJacgifa'orSm &dkufxm;wJh Floating Life , aemufppf&JY qdk;usdK;tjzpfusefcJhwJh ajrjrSyfrdkif;taMumif;xnhf&dkufxm;wJh Red River
aemufwum;uawmh tdrfaxmifa&; '&mrmum Không cân sức 18+wdkYyg/Không cân sức um;u Kanhee Ngọc Hiền qdkwJh AD,uferfu emrnfMuD;rif;orD;&JY tazmftcRwfcef;wcsdKYygvdkY olwkdYqdk'fawGrSmemrnfMud;aevdkY &SmMunhfrdwJh um;av;yg/ wu,fawmh bmrS tJavmufrygygbl;/ tdrfaxmifa&; ynmay;taeeJY tdrfaxmifa&; Zmwfum;rSm wcef; ESpfcef;avmuf jrefrmum;awGvdkyJ ygwmyg/ tdrfaxmifa&; ynmay;Zmwfvrf;qdkawmh rqdk;ygbl;/
bm&,f nm&,f r[kwfbl;/ 'DaeY b,frS roGm;yJ tcef;atmif;aewmeJY usL;ypfxJ AD,uferf taMumif;av;awG odzl;oavmufav; axG&m av;yg;av;awG vma&;rdwm/
achitsone, badinf, bigxxx, Deadmanwalking, DrJones, jim beam, k-pooh, Ko Khant, mgtanta, MNO.BN, mrlynn, murphy, yokesoe
06-17-2012 08:38 AM #58
AD,uferfudk tckrS poGm;r,fqdkwJh olawGtwGuf zkef;eJY tifwmeuf vrf;nTefav;yg/
AD,uferfrSm VinaPhone, Viettel , Mobilefone pwJh service provider ukrfyPDawG&dSygw,f/
usaemfu VinaPhone mobile udk tjrJoHk;avh&dSw,f / t&ifu avqdyfrSm r&dSayr,fh tck Saigon avqdyfu txGufrSm VinaPhone qdkif&dSygw,f/ ppcsif; sim card udk 50,000 VND ay;&ygw,f/ Passport ay;&ygw,f/
-Passport udk copy ul;jyD; jyefay;ygw,f/ tifwmeuf 3G oHk;csifw,fajym&if olwdkYu aps;awG a&;xm;wJh pm&Gufav; ay;ygw,f/
-Data 500 MB - 30 days udk 50,000 VND ay;&ygw,f/ 1.2 GB - 30 days udk 100,000 VND yg/
-uwfeHygwfjznhfjyD;&if 888 udk M50-dich qdkjyD; rufaqhydkYvdkufyg/ tJuae ADvdk SMS wc kjyef0ifvmwmeJY csufcsif; oHk;vdkY&ygjyD/
50,000 VND topup wpfckudk tdkAmqD;udk 12 rdepfavmufajymvdkY&ygw,f/ 'gayr,fh Main Balance udk0txd ajymcsvdkuf&if tifwmeufygr&awmhygbl;/ vdku,fuawmh tawmfaygygw,f/
VinaPhone eJY tdkAmqD;ac:csif&if jrefrmac:csif&if Oyrm 095088898 udkac:csif&if 0095088898 pvHk;udkac:csif&if 00659876543 qdkjyD; a&SYu 00 xnhfvdkuf&HkygyJ/
VinaPhone u wckaumif;wm udk,hfuwfu tcsdefrSDrjznhfvdkY Expire jzpfoGm;ayr,fh topup jyefxnhf&if jyef&oGm;wwfygw,f/
Mobile Sim card tjyif USB internet modem awGvnf; avqdyftxGufuqdkifrSm 0,fvdkY&ygw,f/
[dk;t&ifuawmh &Hk;u '&dkifbmac: oGm;wJh qufoG,fa&;&Hk;udk oGm;0,frdwm tawmfwdkifywfcJhzl;w,f/ udk,fvJ olwdkY&Sif;jywm bmrS em;rvnfbl;/ 'DvdkyJ pGwf0,f&wmyJ/ tckawmh avqdyftxGufrSm VinaPhone u qdkifav; zGifhxm;wm&dSawmh tawmftqifajyoGm;w,f/
t&ifuSIM card awGqdkifwkdif; tvG,fwul 'Dwkdif; bmrS ay;p&mrvdkyJ 0,fvdkY&ygw,f/ tckaemufydkif; qdkifawmfawmfrsm;rsm;rSm topup awGyJ a&mif;awmhygw,f/
usaemfhtxif enf;enf; xdef;csKyfvdkufwm xifw,f/
bigxxx, Deadmanwalking, DrJones, jim beam, k-pooh, mgmgthan, MNO.BN, mrlynn, murphy, yokesoe
04-02-2013 04:07 AM #59
ဗီယက်နမ် မင်းသားကြီးလည်း မိန်းမစလုံးရောက်ကတည်းက ဗီယက်နမ်အကြောင်းမရေးတော့ဘူးနော့
အမှန်တော့ ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ဝက် ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်ဝက် ဖြစ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံလိုဘဲ သဘာဝအရင်းမြစ်ပေါတဲ့နိုင်ငံပါ၊ သမိုင်းကြောင်းအရ ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံထက် သမိုင်းကြောင်းရှည်တယ်။ ခရစ်နှစ်ပေါ်ပြီး ၂ ရာစုလောက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြို့ပြနိုင်ငံအဖြစ် ဗိသနိုး ၊ သရေခေတ္တ ဆိုပြီး တိတိပပ မပြောရဲသေးတဲ့ အချိန်မှာ ရှေးဦး ဗီယက်နမ်တို့ စစ်အင်အားကြီးမြို့ပြ နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေပါပြီ။ ရှေးဦး ဗီယက်နမ် ခေါ် အာနန်တို့ရဲ့ ဒေါင်ဆောင်းခေတ်ပေါ့။
ကျနော်တို့ ရွှေမြေက ကရင်တွေရဲ့ အလေ့အထ၊ အသားရောင် နှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတချို့ သိပ်ဆင်တူတာသတိထားမိတယ်။ ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်တာတို့ မိုးခေါ်ဖားစည်တို့ စတဲ့ အလေ့လည်းတူကြတယ်။
အာနန်တွေအင်အားနည်းသွားတာက နန်ချောင်တို့ရဲ့ နယ်ချဲ့မှုကြောင့်လည်းပါတယ်။ နန်ချောင်တို့ အားနည်းသွားပြန်တော့ တရုတ်တို့ရဲ့ နယ်မြေချဲ့မှုကို ဆက်ခံရတယ်။ ခရစ်နှစ် ၉ ရာစုလောက်ကစပြီး တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု ၊ တရုတ်စာပေ ထွန်းကားခဲ့လို့ တရုတ်ဧကရာဇ်နယ်မြေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဟနွိုင်းမှာရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းနန်းတော်တွေအကုန်လုံးက တရုတ်ဟန်တွေဖြစ်နေတယ်။ ခုချိန် ဟနွိုင်းသွားတဲ့ အခါ တရုတ်စကားတတ်တဲ့လူ တရုတ်စာတတ်တဲ့လူတွေတောင် ခပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်တယ်။
အို ဗီယက်နမ်ပိတ်သတ် ကျူ့ပစ်မန်ဘာတို့ ဘယ်ရောက်နေသတုန်းကွဲ့ ...
abya, Chit.tat.lun.tu, fridayborn, happyvalley, HlaingKaLayThin, jim beam, KoShweYoeLay, MATRIX, Min Nanda, MNO.BN, nyanmoe, paytue, RunAtServer, thidar, weithet, ZuKa